Raha jerena ny lafiny fanamorana ny fihetsehana na ny lafiny pratika, hoy ny fitenenana, dia lojika kokoa ny hoe manamora ny fomba fiasany raha eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha izy no manatanteraka ny asa aman-draharahany. Ao daholo no misy ireo rafitra mavesatra rehetra ilainy fa ny eny Ambohitsirohitra hatramin’izay dia fanatontosana raharaha madinika toy ny fanomezana ireo kara-pidirana hanatrika lanonam-panjakana, ny serasera …. Raha jerena ihany koa ny resaka halaviran-dalana dia akaiky kokoa ny fonenan’ity filoham-pirenena ity etsy Ambatobe ny eny Iavoloha; azony atao tsara koa anefa, tahaka ireo filoha teo alohany ny mipetraka eny miaraka amin’ny fianakaviany. Efa eo koa ny kodanan-dalan’ny By pass. Hany fotoana ahitana ny filoham-pirenena miakatra eny Iavoloha matetika aloha hatreto dia rehefa handray taratasy fanendrena ho masoivoho. Fa dia inona loatra ary no antony? Mistery hana-tantara.